पुँजीगत खर्चको दारुणता
मुलुकको आर्थिक जीवनमा पुँजीगत खर्चको महत्व अहम् हुन्छ । यथेष्ट पुँजीगत खर्चबिना मुलुक समृद्ध हुन सक्दैन । पुँजीगत खर्चले बढावा पाउँदा राज्यमा उत्पादन, रोजगारी र आयस्तर वृद्धि हुन्छ
केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भएयता उहाँले लगातार आर्थिक विकास र समृद्ध नेपालको कुरा गर्दै आउनुभएको छ । उहाँले एक–दुई पटक होइन, निरन्तर एउटै कुरा दोहो-याउँदै समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा दोहो-याउँदै आउनुभएको छ । निश्चित रूपमा मुलुक र नागरिकलाई चाहिएको आर्थिक समृद्धि नै हो । तर, समृद्ध नेपाल बनाउने प्रधानमन्त्री ओलीको अठोट भाषण र नारामा सीमित नहोस् भन्ने आमचाहना हो ।
परिवर्तित संरचनामा प्रहरी किताबखाना
२०३५ सालभन्दा अघि सूरक्षा निकायमा कार्यरत सबै कर्मचारीको व्यक्तिगत अभिलेख र निवृत्तिभरण व्यवस्थापनको काम निजामती किताबखानाले गर्दै आइरहेकोमा २०३५ सालमा प्रहरी किताबखाना स्थापना भएपछि सुरक्षा निकायमा कार्यरत कर्मचारीको अभिलेख व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित पद तथा कार्यालय दर्ता, सिटरोल प्रमाणित, व्यक्तिगत अभिलेख राख्ने, सम्पत्ति विवरण संकलन र अभिलेखांकन र उपचार खर्चको अभिलेख राख्ने जस्ता कार्यहरूलगायत निवृत्तिभरण अधिकार पत्र जारी गर्ने, उपदान किटान गर्ने, तलबी प्रतिवेदन पारित गर्ने, स्केल मिलान गर्ने, अवकाश तथा सम्पति विवरणबारे सूचना दिने जस्ता सेवा उपलब्ध गराउने कार्यहरूसमेत सम्पन्न गर्दै आएको छ ।
शिक्षाको बहुआयामिक चरित्र हुन्छ । बदलिँदो विश्व परिवेशमा कामयावी शिक्षाको माग र आवश्यकता चुलिँदो भएकाले नेपालमा विद्यालय तहदेखि विश्वविद्यालय तहसम्मका शिक्षा, पाठ्यक्रम तथा सिकाइ प्रक्रियालाई समयसापेक्ष बनाउँदै लगिएको छ । प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा त झनै बजारको मागअनुसारको ढाँचामा तिनका पाठ्यक्रमलाई रूपान्तरण गरिरहेका हुन्छन् नै ।
स्वीस बैंक, कालो धन र लगानीको वातावरण
स्विट्जरल्यान्डका बैंकहरूमा नेपालीको निक्षेप बढेको छ । स्वीस नेसनल बैंक (एसएनबी) ले गत साता सार्वजनिक गरेको २०१७ को वार्षिक प्रतिवेदनका अनुसार सन् २००८ मा त्यहाँका बैंकमा करिब ९ अर्ब (८ करोड ६२ लाख स्वीस फ्य्रांक) बराबरको नेपाली रुपैयाँ रहेकोमा १० वर्षमा चार गुनाजति बढेर करिब ३३ अर्ब (३२ करोड २८ लाख स्वीस फ्य्रांक) पुगेको छ ।
नयाँ आन्तरिक विमानस्थल कति आवश्यक छ ?
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले काठमाडांैस्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जेठ ७ देखि दैनिक २१ घण्टा सञ्चालनमा ल्याएर उदाहरणीय कार्य गरेको छ ।
मनसुन सुरु भएसँगै वर्षातको वितण्डाले सहयोगको चित्कारलाई फेरि विगतमा जस्तै हृदयविदारक बनाइरहेकै छ । पहाडमा पहिरोको भय र तराईमा डुबानको पीडा छ । वर्षा नभई खेती र कृषिबाली सञ्चालनको आधार बन्दैन । कतै वर्षा नभएर किसानले भ्यागुताको बिहेसम्म गर्ने गरेका समाचार पनि सुन्नुपरेकै हो । प्रकृतिलाई रोक्न र आफ्नो वशमा राख्न सकिँदैन । तर, सम्भाव्यता भएका स्थान र सरकारले गर्न सक्ने व्यवस्था तथा आवश्यक पूर्वसचेतनामा बेलैमा ध्यान नपु¥याइए त्यसको ठूलो क्षतिको सिकार बन्नुपर्दो रहेछ ।
नयाँ सार्वजनिक सेवा सार्वजनिक प्रशासनको क्षेत्रमा आएको एउटा नयाँ अवधारणा हो । यसलाई सन् २००२ देखि प्रयोग ल्याएका हुन् । खासगरी यसको अवधारणारणा स्क्यान्डेनेभियन मुलुकहरूबाट आएको हो । नयाँ सार्वजनिक सेवाले जनतालाई ग्राहक होइन, नागरिकका रूपमा व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने मूल आवाजलाई आत्मसात् गरेको छ ।
हुम्लामा तीर्थयात्रीको बिचल्ली
चीनको मानसरोवर तीर्थस्थल आउने भारतीय नागरिक हुम्ला र चीनको सीमामा अलपत्र परेका छन् । गएको चार दिनदेखि हुम्लालगायत देशभरको मौसम बदली रही पानी परेका कारण हवाई उडान हुन नसक्दा भारतीय नागरिकको यो अवस्था भएको हो ।
नेपालको आगामी लक्ष्य गुणस्तरीयताको !
हालसालै काठकाडौं उपत्यकाभित्र दूधमा अत्यधिक मात्रामा युरिया र कास्टिक सोडा मिसाएको विषयले बजारमा तरंग नै ल्यायो । करिब पाँच वर्षअगाडि पनि नेपालको दूधमा कोलिफर्म भेटिएको विषयले दूधको गुणस्तरमा प्रश्नचिह्न खडा गरेको थियो । खानेपानीका जारहरू ७५ प्रतिशत गुणस्तरहीन रहेको भनेर समाचारहरू प्रकाशित भैरहेका छन् ।
वायुसेवा निगमको पहिलो एयरबस र पर्यटनका कुरा
सन् १९५८ को जुलाई १ मा स्थापित तत्कालीन शाही नेपाल वायुसेवा निगम हाल नेपाल वायुसेवा निगम (नेवानि) ले यसै वर्ष आफ्नो हिरक जयन्ती मनाउँदै अब ६१ औँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । नेपाल वायुसेवा निगम नेपालमा हवाई सेवा प्रदान गर्ने पहिलो हवाई सेवा हो र हाम्रो गौरवशाली राष्ट्रिय ध्वजावाहक पनि हो ।
सीमा सधैं डुबानमा
मनसुन अलि बढी सक्रिय भएको सुरुका दिनमा नै पहाड र तराई मधेस प्राकृतिक प्रकोपको भुमरीमा परेको छ । पहाडमा पहिरोको समस्या देखिएको छ भने तराईमा डुबान । सालिन्दा पहिरो र डुबानमा पर्नु नेपालीको नियति बन्दै आएको छ । प्राकृतिक प्रकोप सामना गर्नका लागि कुनै पूर्वतयारी नहुनु अहिलेसम्मकै विडम्बना हो ।
आर्थिक समृद्धिका लागि सार्वजनिक संस्थान
सार्वजनिक संस्थानहरू समाजवादी चिन्तनका उपज हुन्, जसले सरकारको जनहित गर्ने उद्घोषलाई सार्थक बनाउने जमर्को गर्छन् । यो शताब्दीको नवआर्थिक उदारवादमा राज्य आफैंले गर्नुपर्ने कोर कामबाहेक अन्य सबै काममा निजी क्षेत्रलाई रुचि र सामथ्र्यअनुसार प्रदान गर्छ । उक्त रुचि र सामथ्र्य नपुगेको क्षेत्रमा सार्वजनिक संस्थानमार्फत सार्वजनिक व्यवहार सञ्चालन गरिन्छ ।
भद्रगोल शैक्षिक संरचना र शैक्षिक गुणस्तरको अपेक्षा
नेपालमा आधाभूत तथा माध्यमिक शिक्षा सञ्चालित विद्यालयको संख्या करिब ३६ हजार छ । यी विद्यालय नेपालका सतहत्तरै जिल्लाका कुना–कन्तरामा छरिएर रहेका छन् । नेपालको हुलाक सेवाजस्तै शिक्षाको संरचना नेपालभर छरिएर रहेका छन् ।